ဂျပန်နိုင်ငံ၌ မိုးသည်းထန်စွာ ဆက်လက်ရွာသွန်းနေပြီး ရွှံ့မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၄ ဦး သေဆုံးကာ ၅ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ Shizuoka စီရင်စု Atami မြို့ရှိ ရွှံ့မြေပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားသည့် နေရာ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တိုကျို ၊ ဩဂုတ် ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဩဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ဆက်လက်ရွာသွန်းနေပြီး ရွှံ့မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၄ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးကာ အခြားသူ ၅ ဦးမှာ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိနေသေးသဖြင့် ပြည်သူများ သတိရှိစွာနေထိုင်ကြရန် ဂျပန်နိုင်ငံ မိုးလေဝသအေဂျင်စီက ထပ်မံ၍ တိုက်တွန်းထားကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာက ဩဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ မိုးလေဝသ အေဂျင်စီက ယခုသီတင်းပတ်၌ ဂျပန်ကျွန်းစုများပေါ်တွင် လေကြောင်းထိပ်တိုက်ဦးတည်မှု ဆက်လက်တည်ရှိနေသဖြင့် လာမည့်ရက်များအတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းမှ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဒေသများရှိ ကျယ်ပြန့်သော နေရာများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ကုန်းမြေများသည် ရေဝပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နောက်ထပ် မိုးအနည်းငယ်ရွာရုံမျှဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း အေဂျင်စီက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ရေကြီးရေလျှံမှု နှင့် မြေပြိုမှုများအား သတိပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ဩဂုတ် ၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်းအထိ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စီရင်စု ၄၇ စုအနက် ၁၇ စုတွင် မိုးရွာသွန်းပြီး ရွှံ့မြေပြိုမှု ၆၂ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၊ စီရင်စု ၉ ခုရှိ မြစ် ၃၆ စင်းသည် မြစ်ကမ်းပါး တာပေါ်ရေကျော်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း နှင့် လူနေအိမ်များ ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း မြေယာဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Okaya Nagano စီရင်စု၌ ဩဂုတ် ၁၅ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွင် ရွှံ့မြေပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နေအိမ်တစ်လုံးအတွင်းရှိ အသက် ၄၁ နှစ် အရွယ်ရှိ Yuki Makibuchi နှင့် ၎င်း၏ အသက် ၁၂ နှစ် နှင့် ၇ နှစ် အရွယ် သားငယ်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Haruki နှင့် Naoki တို့ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Unzen Nagasaki စီရင်စု အနောက်တောင်ပိုင်းမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရွှံ့မြေပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားပြီး အသက် ၅၉ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး နှင့် အသက် ၆၇ နှစ် အရွယ်ရှိ ၎င်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နှင့် ၎င်းတို့၏ အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ်ရှိ သမီးဖြစ်သူလည်း ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မြို့တော်အစိုးရ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရပြီး ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ဩဂုတ် ၁၆ ရက်အထိ ၎င်းတို့အား ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်း သိရသည်။
Hiroshima နှင့် Kumamoto စီရင်စုတို့၌ လူ ၃ ဦး ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေသအာဏာပိုင်များက ဩဂုတ် ၁၅ ရက်တွင် စီရင်စု ၇ ခု၌ လူပေါင်း ၁ ဒသမ ၈၃ သန်းခန့်အား လွှမ်းခြုံသည့် အမြင့်ဆုံးအဆင့် သတိပေးချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို သတိပြုရန် တိုက်တွန်းထားသည်ဟု မီးဘေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
လူပေါင်း ၆,၃၀၀ ဝန်းကျင်အား လွှမ်းခြုံမှုနှင့်အတူ Saga စီရင်စု အနောက်တောင်ပိုင်း၌ ဩဂုတ် ၁၆ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီခွဲအထိ အမြင့်ဆုံးအဆင့် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဩဂုတ် ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းအထိ ၂၄ နာရီအတွင်း Kyushu ကျွန်း မြောက်ပိုင်း၌ မိုးရွာသွန်းမှုသည် အမြင့်ဆုံး ၂၅၀ မီလီမီတာအထိ ရောက်ရှိရန် ခန့်မှန်းထားပြီး Kyushu ကျွန်း တောင်ပိုင်းနှင့် Shikoku ဒေသတို့၌ ၂၀၀ မီလီမီတာအထိ ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။ Kinki နှင့် Chugoku နေရာအနှံ့တွင် ၁၂၀ မီလီမီတာအထိ မြင့်တက်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။ (Xinhua)
Downpours continue in Japan as rain-triggered mudslides lead to4deaths,5missing
TOKYO, Aug. 16 (Xinhua) — Downpours continued to lash Japan on Monday as mudslides killed at least four people and left five others missing, with Japan’s weather agency urging people affected to remain vigilant as the threat of more disasters remains, local media reported Monday.
The Japan Meteorological Agency said that more downpours are expected for wide areas from western Japan to the northeastern parts of the country in the coming days sinceastationary front will possibly remain parked over the Japanese archipelago this week.
As of Monday morning, Japan’s land ministry reported 62 cases of rain-triggered mudslides in 17 of Japan’s 47 prefectures, and 36 rivers overrun their banks in nine prefectures, destroying homes and disrupting transportation.
In central Japan’s Okaya Nagano Prefecture, Yuki Makibuchi, 41, and her sons Haruki, 12, and Naoki, 7, died afteramudslide struckahouse early Sunday morning.
In the southwestern city of Unzen Nagasaki Prefecture,amudslide triggered by the downpours led toa59-year-old woman’s death and her husband, 67, and their daughter, 32, missing, according to the city government, with rescue workers continuing their search for them on Monday.
As of 8:30 a.m. local time on Monday, the highest-level alert remained in the southwestern prefecture of Saga with around 6,300 people covered.
In the 24 hours as of noon Tuesday, rainfall in northern Kyushu is expected to reach as high as 250 mm, while up to 200 mm is forecast in southern Kyushu and the Shikoku region. A forecast of up to 120 mm is made across the Kinki and Chugoku areas. Enditem
Photo – Rescuers work at the mudslide site in Atami, Shizuoka prefecture, Japan, July 4, 2021. (Xinhua/Hua Yi)